Dowladda Soomaaliya oo shaaca ka qaaday inay soo daabacayso lacago cusub – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Soomaaliya oo shaaca ka qaaday inay soo daabacayso lacago cusub
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay dhawaan soo daabici doonto lacago cusub oo shillin Soomaali ah, si xal kama dambeys ah loogu helo dhibaatada daba-dheeraatay oo ka taagan lacagaha been abuurka ah iyo kuwa duugoobay.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo maalintii shalay kullan la yeeshay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhawaan soo daabici doonto lacag cusub oo badasha kuwa duugoobay iyo kuwa been abuurka ah.
Wuxuu ra’iisul wasaare Kheyre sheegay in wadada kaliya ee looga hortagi karo dhibaatada ka dhallan karta adeegsiga lacagaha been abuurka iyo kuwa duugoobay ay tahay in lasoo saaro lacag cusub oo badasha tii hore.
“Dowladda Soomaaliya waxay dadaal ugu jirtaa sidii ay kusoo daabici lahayd lacago cusub oo badesha tii hore ee duugoowday, si looga hortago lacagaha been abuurka ah, waxaan shalay la kulmay guddoomiyaha bangiga dhexe, waana ka wada hadalnay arrinkaan” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidaan oo kale dhowr mar hore u sheegtay inay lacag cusub soo daabaceyso, si muranka lacagaha been abuurka iyo kuwa duugoobay looga gudbo, laakiin wali ma aysan suurta-galin arrintaas.